Article submitted by: Thunderbolts on 21-Dec-2013
သခင် အားရ ကျွန်ပါးဝ တွေကို ဖယ်ရှားကြ။
ဖြုတ် ထုတ် သတ် လမ်းစဉ် လိုက်ကြမလား ?
အတိုင်အတော တွေက ထူ။ တိုင်းပြည်ဟာ မင်းမဲ့ စိုးမဲ့ ၊ လူဦးရေ သန်း ၅၀ ကျော် ၆၀ နီးပါးမှာ ဒီအတိုင်း သာဆိုရင် တယောက်မှ ကောင်းတဲ့လူ မရှိဘူး ၊ အစိုးရနဲ့အမှုထမ်း အရာထမ်း၊ လယ်လုပ် ကုန်သည် ပွဲစား ရပ်ကွက် လူကြီး တွေနဲ့ ရပ်ကွက်လူထု ကောင်းသူ များရှိသေးရဲလား။ ဘုန်းကြီး ဆိုသူတွေ ဆို တာတွေက ရော ? မေးခွန်းကို အကြောင်း အကျိုးနဲ့ ဖြေလာမဲ.လူ ပေါ်လာရင် ကောင်းတာပေါ့ ၊မျှော်တော့ မမျှော်လင်.ပါဘူး ။
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ Nobody is perfect လို.ဆိုထားတယ် ၊ ဘိုင်ဘယ် မှာလဲ He who has no sin, cast the first stone လို ယေရှုကပြောတယ် လို.ဆို ထားတယ် ။ ဒီစကားတွေအရ ဆိုရင် လောကသားတွေဟာ အားလုံးအပစ်ရှိကြ တယ် ဆိုတာဘဲ အားလုံးဆိုတာ ဘယ်သူ တွေ လဲ ? ကမ္ဘာဦးကျမ်းဆို တာ မှာတော့ ဂေါ(ဒ) ဖန်ဆင်းတဲ့ လောကသား အာဒမ် နဲ.အိ(ဗ) တို.အပါအ၀င် သူတိုက ဆင်းသက်တဲ့သူတွေဟာ ပြော မနိုင် ထိမ်းမရ သိမ်းမရလို. ဂေါ(ဒ်)က ကမ္ဘာကြီးကို ရေနဲ ဆေးပစ်လိုက်တာ လူမျိုးအားလုံး ဂျီနိုဆိုက် သွား တယ် ။ ချစ်သား အာဗြဟန် နဲ့ မိသားစု ဘဲ လွတ်တယ် တဲ့ ။ ကဲ အဲဒါသာ ကြည်.တော့ လူဆိုတာ မပြောနဲ့ ဂေါ့(ဒ) တောင် မျက်နှာလိုက် လိုက်တာများ ။ ငါ့စကား နားထောင်ရင် ငါကြည့်ရှုဆောင်မ မယ်၊ အပစ်ကင်း သူ ရှိသေး တယ် လို.ဆိုခြင်တာလား? အာဗြာဟန် မိသားစုက ဆင်းသက်တဲ့ လောက သားတွေ ဟာလဲ၊ အာဗြဟန်သွေးပါနေလို. အကျင့်ပျက်နေကြတာ လား။
သားသမီး မကောင်း မိဘခေါင်း ဆရိုးအရပြောရရင်၊ လောကသားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် ဂေါ့(ဒ) ကိုယ်တိုင် မကောင်းလို.လား၊ လွတ်လပ်ခွင်.ပေးတာ များသွားလို.လား လို.မေးစရာဖြစ်နေ တယ် You reap what you sowed အရ ဆိုရင်လဲ ဖန်တီးရှင်ရဲ့ အပစ်ဘဲ ။ အဲဒီတော့ မြတ် ဗုဓ္ဒက (ဘယ်သူမပြု မိမိမှု)ုလို.ဆိုထားတော့ (မိမိ) ဆိုတာဟာ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် အပါ အ၀င် လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံးပါတယ် ၊ အကျုံးဝင် တယ် လို.မှတ်ယူရမယ်။
ဒို.နိုင်ငံ ဒို.လူမျိုးကို ဗလ ငါးတန် ပြည့်ဝဘိုရာ ဂေါ့(ဒ) ကို သဓကယူ၊ ၊ ဖြုတ် ထုတ် သတ် လမ်းစဉ်ချလိုက် ရင်လဲ ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ? လူသစ် စိတ်သစ် လမ်းစဉ်သစ်တွေ နဲ. ရက် ၁၀၀ အတွင်း အာဗြဟန် မိသားစုက လောကနိဗ္ပာန်ကြီးတည်ဆောက်ကြလိမ့် မယ် ဆိုလို.လဲ မဖြစ်သေးဘူး၊ (ဘယ်သူ မပြု မိမိမှု ) ဆိုတာ လောကသားတဦးချင်းနဲ.သက်ဆိုင် တယ် ၊ တဦးချင်းရဲ့ အကောင်းပြုချက်၊ မကောင်း ပြုချက် ဆို တာတော့ ရှိနေအုံးမှာ မို. (ဘယ်သူမပြု မိမိမှု) ဆိုတာဟာ အခါမလပ် မှန်ကန်နေတယ်။
ဒီလို ဆိုရင် ၂၀၁၅ ခု ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးရင် ပြီးမသွားဘူး။ ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင် ဆင် ခြင်း ၊ အသစ် ရေးစွဲခြင်းတွေဟာ အနာဂါတ်မှာ ပေါ်လာတဲ့အချိန်အခါ အခြေအနေ တွေ အရ ပြင်ဆင်ခြင်း အသစ်ရေးစွဲ ခြင်း တွေ လိုအပ်သလို. လုပ်ကြရအုံးမှာဘဲ ဆိုတာကို နားလည် သဘောပေါက် လက်ခံရမယ်။
ပြောခြင်တာလေး ဆက်ပြောလိုက်အုံးမယ် စဉ်းစားကြည့်ကြဘို.ပါ ။ သီးခံပြီး ဆက်လက် နားဆင်ပါနော် ။
အခုရေတွင်းတူး အခုရေကြည်သောက်ခြင်လို.တော့ မရပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ ဖန်တီး နေတဲ့ အနိတ္ထာရုံ တွေကို ရက်အနဲငယ်အတွင်း ဖြေ ရှင်းလို.ရနိုင်ပါတယ် ။ လိုအပ်တာက စွန်.စားရဲ ရမယ်။ အကြောင်းအားလျှော် စွာ ပေါ်လာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချနိုင်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် (အလျှင်လို လမ်းအို လိုက် ) ဆိုတဲ့ စကားအရ ၊ သီလ ၅ ပါး စောင့်ထိမ်းမှုမရှိသူ မှန်သမျှ ကို လူ.အသို်င်းအ၀ိုင်းမှ ဖါယ်ရှား ဖျောက်ဖျက် ပစ်ဘို.လိုနေပုံ ရှိတယ် ဆိုတာ တွေ.ရတယ်။ တယောက်မှ ကျန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အော်မှား သွားလိုပါ ခွင့်လွတ်ပါမောင်တို.ရယ် မစုကြည်နဲ့ တစုကတော့ ဂေါ့(ဒ်)တွေရဲ့ အချစ်တော် တွေဆိုတဲ့ အပစ်မဲ့ အာဗြဟန် မိသားစုဘဲ ပေါ့။
အီစလန်းမစ် ( မွတ်စလင်) နိုင်ငံတွေမှာ ခိုရမ်ကျမ်း ပေါ်အခြေခံတဲ့ တင်းကြပ် တဲ့ အီစလန် တရားတော်နဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်တယ် လို.သိရတယ် ။ ခရစ်ယန် ဘာသာမှာရော ဘာထူးသလဲ ဆော်လမုန် ဘုရင်ကြီး လက်ထက် တရားစီရင် မှုတွေ ကို ဖတ်ဘူး ကြားဘူးကြမှာပေါ.၊ ဘိုင်ဘယ် ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်မှာလဲ တွေ.ရတယ် ။ ပြောတဲ့ ဖြတ် ထုတ် သတ် လမ်းစဉ်တွေ လူ.သမိုင်း တ လျှောက် ရှိခဲ့တယ်၊ အခုလဲ ရှိနေတုန်းဘဲ ငြင်းလို.မရ ဘူး ဆိုတာကို လေ.လာတွေ.ရှိ နိုင်ပါတယ် ။
မှန်တာ မမှန်တာ အပထားလို. အလုပ်ဖြစ်တာတော.အမှန်ဘဲလို သိရတယ်၊ မှန်တာ မမှန် တာလို.ဆိုတာ ဟာ မှားတယ် လို.မဆိုခြင်လို.ဘဲ ၊ ကျနော်မှား ပါတယ်. ကျမ မှားပါတယ် လို. ဘယ်သူဝန်ခံမှာလဲ ။ ကာလံ ဒေသ အင်္ဂမ် ဒနံ လို. ဆိုထားတော့ ကာလ ဒေသ အခြေ အနေအရ လူအသိုင်း အ၀ိုင်းကို ထိမ်းသိမ်းဘို. အစိုးရတွေဟာ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ကြတာ ဘဲ လို.ယူဆရ မှာ ပေါ့။ အရှေ.အရပ်မှာ မှန်တာဟာ အနောက် အရပ်မှာ မှား ခြင်မှားမယ် ၊ အရှေ.ဟာအရှေ.။ အနောက်ဟာ အနောက်မဟုတ်လား ရောလို.မရတာ က တော့ တ ကယ် ဘဲ ၊ ဓါတုဗေဒ ဆေးများလို ရောလိုက်လို. ဓါတ်ချင်းမတူရင် ပေါက်ကွဲ တတ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီပေါက်ကွဲမှုတွေ ဘဲ ပေါ့။ တခြား အရပ်တွေမှာလဲ တွေ.ရတယ်။
အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောရရင် အနော်ကဖက်ကလူတွေဟာ ဆရာသိပ်လုပ် တယ်. သူတို.မှ ဆရာမလုပ်ရ ရင် ဘယ်သူမှ မကောင်းဘူး။ အရှေ.ဘက်က လူတွေကလဲ (ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချ စောင့်သီလ) ဆိုတာကို လွန်မင်းစွာကျင့်သုံးနေ တော အနောက်က လူတွေအတွက် အကွက် ကောင်းပေါ့ ၊ အခုကြည့်ပါလား ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးတွေကို သိသိသာသာ ထင်ထင် ရှားရှား -၀င် ရှုတ် နေတာတွေရတယ်၊ မစုကြည်တိုလို အတိုက် အခံတွေကတော့ သခင် အားရ ကျွန်ပါးဝတွေ ပေါ့လေ ။ အင်္ဂလ်ိပ် အမေရိကန်တိုဟာ သူပုန်တွေဆီ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ထွက်သွား လာနေကြတာတွေရတယ် ။ ဘာတွေ ခြေ ရှုတ်ပြီးဘယ်သူကို ကူညီနေတာလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ သံတမန်စည်း ကမ်း တွေနဲ့ ညီ ကြရဲ့ လား။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး တဲ့၊ တရား ဥပဒေတိုင်း တရားသလား? ပစ်မှုကျူးလွန် တာ ဟုတ် ပါ့မလားဆိုတဲ့ သို.လော သံသယ စိတ်ကင်း အောင်ကို သက်သေ အထောက် အထားခိုင် လုံရမယ် လို. ဥပဒေက ဆိုတယ်။ အမှန်တကယ် ပြစ် မှု ကျုးလွန်သည့်တိုင် သက်သေ အထောက်အထား မခိုင်လုံ ၊ သို.လော သံသယ စိတ် ၀င်ရင် တရားခံ လွတ်သွားတာ ဘဲ၊ အဲဒီတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး Rule of laws ဆိုတာ ဘာ လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ပေါ်လာရတယ် ၊ အထူး သဖြင့် မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အားနာ တတ် တယ် သူကံနဲ့သူ ရှိပါ စေ၊ ကိုယ့် ကြောင့်တော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဆိုတာနဲခွင်.လွှတ်နေကြ တာ၊ ဘယ် တရားက လာပြီး စိုးမိုးရမှာလဲ ၊ ဒါကို ဗုဓ္ဒဘာသာ လို.လဲ အချောင်ဝင် ဂုဏ် ယူ လိုက် သေး တယ်။
ကမ္ဘာ န်ိင်ငံတွေရဲ့ သမို်င်းကို လေ.လာရင် ထိုနည်း နှင်နှင် တရားဓမ္မ အတိုင်း ဖြစ်ကြသလို ၊ တဖက်ကလဲ ဖြတ် ထုတ် သတ် လမ်းစဉ်တွေကိုလဲ ချမှတ် ကျင့်သုံးခဲ့တာတွေ တွေ.ရတယ် ၊ နောင်လာနောင်သားတွေ မလုပ်ရဲ အောင် ပေါ့ ။ တရားနဲ့ ဒါးဆိုလား၊ အင်္ဂလိပ် လိုကတော့ Carrot and Stick ဆိုတာ ထင် ပါရဲ့ ။
ဒို.ဘိုးဘွား ဘီဘင်တွေ ဟာ ကိုယ့်မင်း ကိုယ်ချင်း အောက်မှာနေစဉ်ကရော၊ သူများမင်း သူချင်းအောက်မှာ နေရတုန်းကရော အပစ်ရှိရင် ရှိသလို အရေး ယူ ခံရတယ် ၊ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာဆိုရင် ခေါင်းဖြတ်ပြီး အများပြည်သူကို ပြထားတယ် ၊
ဘုန်းကြီးတွေတောင် ထောင်ထဲရောက် ထော်ငထဲမှာ သေရတယ်၊ လူတွေ အထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ ရတာ၊ သေခဲရတာ အသတ်ခ့ခဲ့ရတာတွေ လဲ မနဲဘူး။ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဒိုနဲ့တန်းတူ အလားတူနိုင်ငံတွေရဲ.သမိုင်း ကို လေ.လာရင် ဒို.ခံရသလို သူတိုလဲ ခံရတယ် ဆိုတာ တွေရ တယ် ၊ မြန်မာတွေ ကတော့ ဗုဓ္ဒဘာသာပီပီ မေတ္တဘာဝနာ ပွားများ ကြတယ်ပေါ့၊ ဖြုတ် ထုတ် သတ် လမ်းစဉ်တွေ ဟာ အင်ပါယာတည်ဆောက်သူတွေရဲ့ ကျင့်ထုံးတွေပေါ့၊ ရှေး ပဝေဏီက ကိစ္စတွေမပြောနဲ့ မကြာသေးမီကာလ က အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ် တဲ့ မြောက်အိုင်ယာလန် နယ်က ဖြစ်စဉ်တွေဟာ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်ဘဲ ရှိနေသေးတယ်။ မြောက် အိုင်ယာလန်နယ် မှာ အင်္ဂလိပ် လိုလားသူ.၊ ဆန်.ကျင်သူ၊ ကက်သလစ် ဘာသာဝင၊် ပရိုတက်စတင့် ဘာသာဝင် ရယ် လို ဂိုဏ်းကြွဲပားပြီး အစွန်း ရောက်တွေ ကြောင့် ပြသနာပေါ် ခဲ့တာဘဲ ။
ဒိုနိ်ုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်လိုလားသူ အမေရိကန် လိုလားသူ ဘယ်သူဆိုတာ ပြော ဘို.လိုသေး သလား မစုကြည်ရဲ့ နောက်လိုက်တွေဘဲ၊ မပြောပေမဲ့ သိနေကြ တာဘဲ ။ တချို.ယောယိမ်း ဘသားယိမ်းတွေကတော့ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် နိုင်ငံ ဘယ်သွားလို ဘယ်လာနေတယ် ဆိုတာ သိခြင်မှာသိမယ်။
လက်ရှိ တရုတ်ပြည်သူ.သမတနိုင်ငံ ၁၉၄၉ ခုက ပြည်တွင်းစစ် ပြီးခဲ့ပြီး မော်စီတုန် ဦးဆောင်တဲ့ ကွန်မြူနစ် ပါတီ အာဏာရ လာတယ်၊ မဟာ ခုန်ပြန် ကျော်လွှားမှူု ကြီးဆိုတဲ့ စီးပွားရေးနဲ လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စီမံကိန်း မှာ ၄၅ သန်း ငတ်မွတ် ဘေးနဲ့ သေဆုံး ရြ့ပီး ၊ မြေပိုင်ရှင်၂ သန်းခန်.လဲ အသတ်ခံရတယ် လို အနောက်ဖက်က ပြုစုတဲ မှတ်တမ်း တွေ က ဆိုထား တယ် ၊ ဒါပေမဲ့ တရုတ်ပြည်သူ သမတ နိုင်ငံဟာ ၁၉၇၁ ခုမှာ ကုလသမဂ နေရာရခဲ့တဲ့အပြင် လုံခြုံရေးကောင်းစီရဲ့ အမြဲတန်း ကြီး ၅ ကြီဲးထဲက အဖွဲဝင် တနိုင်ငံဖြစ် လာတယ် တခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ.အစည်းတွေမှာလဲ တရုတ်နိုင် ငံ မပါတာမရှိဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံကမှ မထေမျက်မြင် မလုပ်ရဲဘူး။
ဒီနေ. တရုတ်နိုင်ငံ အကြောင်း မသိသူမရှိသလောက်ပါဘဲ၊ ပြောခြင်တာက တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြေဧရိယာ ရော လူဦးရေပါ ဒို.ထက်ကြီး၊ ဒို.ထက် မနှိုင်းဆ နိုင်အောင် များပြားတယ် ၊ တရုတ်တွေဟာ နတ် ဗြဟ္မာတွေ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေဟာလဲ ဒို.လို လူတွေဘဲ ၊ မော်စီတုန်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းလို.လား - ပြည်သူတရပ် လုံး တတတ်တအား ပါဝင်ပြီး ပြည်သူ.သမတနိုင်ငံ တော် ကို တည်ထောင်ခဲ့တာဟာ အနုနည်း အကြမ်းနည်း တွေပါဝင်ခဲ့တယ် ၊ လုပ်သလို မဖြစ်လို. ဖြစ်သလိုလုပ်ခဲ့ရတာတွေ ရှိမယ် ။
Third Richt ဗိသုကာကြီး Adolf Hitler တယောက် ဂျာမန်လူမျိုးတွေကို ညီညွတ်စေခဲ့တာ ကမ္ဘာက သိမ့် သိမ့်တုန်သွားရတယ် ။ သူကို အမျိုးမျိုး စွပ်စွဲပြီး ၀ိုင်းဖွဲ ၀ိုင်းဘေ လိုက်ကြပေမဲ့ ၊ ဂျာမန် လူမျိုးတွေ ဟာ ဒီနေ. ထိ နေရာတကာမွှာရည်အချင်း နဲ.စွမ်းရည်ပြည့်ဝ သူတွေဖြစ်ကြတယ် ၊ ဂျပန် တွေလဲ ဒီအတိုင်းဘဲ ။ ဒါပေမဲ့ သူတို.ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို တော့ ဆုံးရှုးံသွား ကြ ရတယ် ။ ဒိုနိုင်ငံမှာတောင် စင်္ကြာ တံဆိပ်နဲ့ ကုန်သယ်တွေ ရှိခဲ့ဘူး သေး တယ် ၊ ရဲဘော် ၃ ကြိတ်ဝင် ဗိုလ်စကြ်ာ ( Jimmy Klusemann) တယောက် အပါအ၀င် ပေါ့ ၊ ဖက်စစ် စံနစ်နဲ.ဂျပန်တွေ ကို ဒီု.ဆီခေါ်လာတာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဆိုတာကို လဲ မမေ့ကြနဲ့ အုံး။ သူသမီးကလဲ ဘာတွေ ခေါ်လာ နေသလဲ ဆိုတာတော့ အထူးပြောဘို. လိုမယ် မထင်ပါဘူး။
သမိုင်းအရ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကြမ်းတန်းလှတဲ့ ဘ၀ခရီးရှည်ကြီး နည်းမျိုးစုံ စံနစ် မျိုးစုံနဲ့ချီတက် တရုတ်ပြည်သူ သမတနိုင်ငံ တည်ထောင်လာတာ ၊ ဒီနေ.ဒီအခြေကိုရောက်ဘို. ဒီမိုကရေစီနဲ့ ရောက် လာတာ မဟုတ် ဘူး ဆိုတာ သိရတယ် ။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဆိုတာကို အမွှန်းတင်နေ တာ မဟုတ်ဘူး ပြည်သူ တွေ ညီညွတ်စည်း လုံးတာကို ပြောနေတယ် ဆိုတာ ကို နားလည် သဘောပေါက်ကြရင် ကောင်းမယ် ။ ဖြုတ် ထုတ် သတ် လမ်းစဉ်ဟာ ကွန်မြူ နစ်ဝါဒ မပေါ် ခင်က ရှိနေခဲ့တဲ့ သက်ဦးဆံပိုင် ၀ါဒ ဆိုတာကို သိထားသင့် တယ် ။
တရုတ်ပြည်သူတွေ၊ ဗီယက်နမ် ၊ ကမ္ဘောစီးယား၊ လေါ. ကိုရီးယားနဲ့ ဒို.နိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ.တောင် အာရှ နိုင်ငံတို.ဟာ အနောက်အုတ်စုရဲ ချယ်လှယ်မှု တွေ ဗိုလ်ကျမှုတွေကို သိရက်နဲ့ ခံ နေရတယ် ? ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာ ဆိုသလို ဖြစ်နေရတာ အတွင်းက လောက်တွေ ခြ တွေ ၊ ပုဆိန် ရိုးတွေ ကြောင့်ဆိုတာ ဒို.အား လုံး နားလည် သဘောပေါက်ရမယ် ။ ဒီ အတွင်း လောက်တွေ ခြတွေ၊ ပုဆိန်ရိုးတွေဖြစ်တဲ့ သခင်အားရ ကျွန်ပါး ၀ တွေကို ဆန်.ကျင်ရမယ် ဖါယ် ရှား ပစ်ရမယ် လို.ပြောလိုက်တော့မယ် ၊၊
ဆက်ပြောရရင် ဒေါသတွေ ထွက်ကုန်ပါလိမ်.မယ် ။